I-Semalt: Ungayenza kanjani i-Spot Futhi uvimbele ukugaxekile kokudluliselwa kwe-Google Analytics
Ngebhizinisi elilinganiselwe, akukho okungcono kunokungena ngemvume ku-akhawunti ye-Google Analytics nokubona okuningi kwethemikhali ezayo. Ungathola injabulo ukwazi ukuthi iwebhusayithi yakho ithola ukubukwa okuhlukahlukene futhi angeke ingene ekuhlolweni ngabe ngabe lo mgwaqo uqobo noma cha. Uma ungenayo imithombo yezokuxhumana eqinile noma ungazange wenze i-SEO ngokufanele, khona-ke kunamathuba wokuthi ube yisisulu se-Google Analytics yokudlulisa ugaxekile. Hlola ngokucophelela uma uthuthukile kahle ama-backlink noma cha. Futhi uma ungenayo i-backlink futhi usaqhubeka nokuthola ukubukwa okuningi, khona-ke ithrafikhi yakho yonke inkohliso futhi ayiyona emthethweni - ap royal oak offshore replica.
U-Lisa Mitchell, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt , uyakwazi ukulwa nokudluliselwa kogaxekile nokwabiwa kwamasheya lapha.
Ugaxekile we-Google Analytics lungaphezu nje kokusakaza isikhalazo uma kuziwa ekusebenzeni ibhizinisi impilo yonke. Ama-bhoti angakusiza ukukhwabanisa isayithi lakho, kepha awukwazi ukuthola noma yikuphi ukuthengisa noma imali engenayo kusuka ku-AdSense. Ngaphezu kwalokho, awukwazi ukuzuza ezinsizakalweni zokulandelela zeGoogle njengoba uhlaselwa ugaxekile we-analytics. Lokhu kungadala impembelelo enkulu emininingweni yakho ebonakalayo, uvimbele izitayela namaphethini esayithi lakho, futhi uthole izinga lokunciphisa amaphesenti. Ama-bots we-Analytics angakwazi futhi akwenze ngenani elikhulu elingenakwenzeka ukubhekana namabhizinisi amancane..Isibonelo, uma uthola ama-hits amaningi nokubukwayo kuleli sonto, futhi ungakaze ube ne-SEO, khona-ke uyisisulu salolu daba, futhi kufanele ulahlekelwe ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Ukusakaza ugaxekile wokudlulisela
Amanye amawebhusayithi egaxekile enza kube lula ngawe ukuba uwabonise, ama-best- seo -offer, 100dollars-seo, namanye afanayo. Kulula ukuwabona ngoba ama-URL awo akhona kwi-intanethi. Ukuthenga izinsizakalo ze-SEO ezivela enkampanini ethembekile kuyindlela kuphela yokuphila kwakho kwi-intanethi. Uma unomthengisi wedijithali, mcele ukuthi abone ukugaxekile kogaxekile futhi asuse ngokushesha ngangokunokwenzeka. Amawebhusayithi angalungile avame ukuba asemthethweni, futhi ungawathola ngezixhumanisi ezingahleliwe nama-imeyili amanga. Uma othile ekubamba nge-imeyili, ekucela ukuba uchofoze izixhumanisi ezihlinzekwe zona, kufanele uzigcine kude nabo. Ngeshwa, ugaxekile we-Analytics luhlukile futhi luyinkimbinkimbi kakhulu ukuthola indawo yogaxekile yokudluliselwa. Noma nini lapho ubona izinkomba ezivela ku-freemoneyonline noma kumawebusayithi afanayo, kungcono ukuvala amafasitela abo phansi bese usula isilondolozi sakho.
Ukuvimba ugaxekile wokudlulisela
Uma usuqaphele ukuxhunyelwa kogaxekile, isinyathelo esilandelayo ukuwayeka ukuba angadlulanga imibiko yakho ye-Google Analytics. Izihlungi kuyindlela elula yokuziyeka. Ungakha izihlungi eziningi ngangokunokwenzeka ukuvimbela ukuvakashelwa kogaxekile kusuka kubhalwa ku-Google Analytics. Ngaphandle kwalokho, ungathola imibono engavumelekile evumela ukuthi isayithi lakho lithole kuphela umgwaqo osemthethweni. Ukubuka kokuhlola, ngakolunye uhlangothi, ikhophi yemibono engaphenduliwe lapho ukhululekile ukungeza izihlungi ezihlukene kuzibalo zakho zokuhlola. Okokugcina kodwa hhayi okungenani, ungakhetha ukukhetha okubukwayo okuhlolisisa izihlungi zakho bese usebenza ngokuzenzakalelayo ukwenza imisebenzi yakho.